Blockchain Izindaba 07.06.2018 - Blockchain Izindaba
Fidelity kungase ukuqalisa exchange mfihlo
Fidelity Investments, ifemu eyengamela $2.5 isigidintathu amafa ephethwe, iceba le buildout imikhiqizo ukuthi ngabe ibenze emakethe Bitcoin ezingeni elilandelayo.
Ngaphezu kwalokho, Fidelity iyaqasha ukwakha digital kwempahla lokushintshisana, ngokuvumelana umsebenzi isikhangiso yangaphakathi. I eqinile ufuna DevOps uhlelo unjiniyela “ukusiza unjiniyela, ukudala, futhi akusebenzise ukushintshana Digital Asset kokubili ifu kwasobala nokwabantu ngabanye.”
I eqinile nakho abasebenza esitokisini izixazululo mfihlo, ngokuvumelana esinye isikhangiso umsebenzi.
Uma Fidelity ngempumelelo oluqalisa mikhiqizo, ke lungamelela omunye uhamba enkulu inkampani i-Wall Street ku emakethe amafa digital.
Kuyaphawuleka, CEO Fidelity sika, Abhigayili Johnson, kuyinto umsekeli walokhu Bitcoin.
Uma Fidelity enza ukuqalisa exchange umnikelo mfihlo, bekungaba kunjalo kube phakathi uhamba enkulu inkampani enkulu Wall Street phakathi nascent emakethe mfihlo, esimelela cishe $350 bhiliyoni.
Thailand nokulingwa emaphakathi yasebhange cryptocurrency
Bank of Thailand umbusi Veerathai Santiprabhob wabonisa enkulumweni yamuva ngokuthi ukuhlakulela wholesale central yasebhange lwemali digital okwamanje iphayiphi njengengxenye yemizamo wezwe letibanti trialing ubuchwepheshe blockchain emikhakheni eyehlukene.
Le phrojekthi, okuthiwa Inthanon, ukwabelana igama entabeni eThailand esiphakeme kunazo zonke, uhlose ukwakha siqu blockchain cryptocurrency ibhange ngokusekelwe ukwenza interbank ukuthengiselana kokubili ngokushesha futhi eshibhile.
“Lemizamo kumele iholele kuthengiselana ngokushesha futhi eshibhile futhi ukuqinisekiswa ngenxa wamabhange kancane babedinga kuqhathaniswa izinhlelo zamanje.”
Northern Trust Amafayela patent ukugcina amaminithi umhlangano blockchain
Amasevisi emali ngokuqinile Northern Trust iwine igunya lokwenza isipele amarekhodi emihlanganweni usebenzisa tech blockchain.
Indlela isebenzisa uchungechunge izinkontileka smart uthwebule idatha ehlobene umhlangano, kuhlanganise amarekhodi ngubani uyahlanganyela (kuzo amadivayisi bangamenze baphathe), lapho bekunomhlangano nalapho.
Northern Trust hones ngemvume ukusetshenziswa icala ethize kakhulu, idatha yomcimbi, futhi ukhuluma mkhuba le nkampani ebanzi ibuthelele idatha tekusebenta ngokusebenzisa uhlelo lusatshalaliswe.
Coinbase kwenza intuthuko babe ngokomthetho izibambiso eqinile
Cryptocurrency lokushintshisana Coinbase imemezele ngoLwesithathu ukuthi owayezamazamisa yathuthuka emgomweni yayo eqhuba Federally ezilungisiwe nomdayisi nomthengisi.
Chief yokusebenza isikhulu nomongameli Asiff Hirji wabhala kokuthunyelwe inkampani ibhulogi ngokuqinile kuyinqubo yokuzuza ilayisensi nomdayisi nomthengisi. Inkampani uhlose ukufuna imvume U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) kanye kwemboni ngekwetimali Regulatory Authority (FINRA) ukunikela izibambiso blockchain ezisekelwe.
Kraken Daily Market Umbiko 06.06.2018
$118M adayiswa kuwo wonke ezimakethe namuhla
Blockchain Izindaba 11.07.2018
Umbani Network inwebeka 3...
I 72 Hour Bitcoin Challenge ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 06.06.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 08.06.2018
Juni 29, 2018 ngesikhathi 10:23 AM
😱 Bitcoin (BTC) To See EXTREME ACTION HERE?! – Crypto Market Trading Analysis & Cryptocurrency Izindaba
Januwari 17, 2019